Iingcebiso ezi-5 zokukhathalela i-smartwatch yakho kwaye ngenxa yoko wandise ubomi bayo obuluncedo | Iindaba zeGajethi
IiVillamandos | | SmartWatch
Los Smartwatches Beza kubomi bethu ngexesha elithile elidlulileyo ukuba bahlale kwaye babe sisiphelelisi esifanelekileyo kwisixhobo sethu esiphathwayo. Ndiyabulela koku, ayizukukwazi kuphela ukujonga ixesha esihlahleni, kodwa asizukuphoswa ngumnxeba kwakhona kwaye siya kuba nakho, umzekelo, ukujonga nasiphi na isaziso emsebenzini ngaphandle kokuba sisuse i-terminal yethu ipokotho okanye ibhegi.
Ngelishwa zizinto ezibonakalayo ezibonisiweyo kwaye nangawuphi na umzuzu banokufumana ukubethwa, basishiya siphawulwe ngonaphakade. Andazi ngawe, kodwa ubuncinci ndiyayicaphukela iwatchwatch yam ekrwitshiweyo okanye yokonakala. Yiyo loo nto namhlanje ndiza kukunika Iingcebiso ezi-5 zokukhathalela i-smartwatch yakho kwaye ke wandise ubomi bayo obuluncedo.
Ukuba unayo i-smartwatch okanye ucinga ukwabelana ngayo kungekudala, qhubeka ufunda kuba ngokuqinisekileyo oku kuya kuba nomdla kuwe kwaye uya kufumana iingcebiso kunye nolwazi olunokukunceda ugcine isixhobo sakho sikwimeko entle.
1 Sebenzisa iglasi enomsindo ukukhusela isikrini
2 Izimbozo, azintle kakhulu, kodwa zisebenza kakuhle
3 Kunqande ukungxama nokuzisa iwatchwatch yakho kwiindawo eziyingozi
4 Thatha smartwatch xa ubona ingozi kufutshane
5 Yiwotshi, ungalibali
6 Izimvo ngokukhululekileyo
Sebenzisa iglasi enomsindo ukukhusela isikrini
Uninzi lweewotshi ezifanelekileyo ezikhoyo kwintengiso zisinika isikrini esenziwe ngezinto esizikhusela kumaqhuma nakwimikrwelo, nangona kungenjalo njengokuba besingathanda njalo. Ngethamsanqa zininzi iglasi enomsindo ukukhusela ikhusi lethu kunye nokuthintela ukuba lingakhuhle okanye liphule.
Ukuba unayo Apple Watch, un Gear S2 okanye Ukubukela kwe-LG R KwiAmazon ungafumana isixa esikhulu seglasi enomsindo eyahlukileyo enamaxabiso ahluke kakhulu. Kwimeko apho une-smartwatch esaziwa kancinci, ungakhathazeki kuba nakwivenkile ebonakalayo eyenziwe nguJeff Bezos okanye nakweyiphi na uninzi lwezinto ezikhoyo kwinethiwekhi yenethiwekhi unokufumana ukhuseleko kwiwatchwatch yakho.
Ewe kunjalo, ngaphambi kokuyazisa ukuyithenga, Gcina ukhumbula ukuba iglasi enomsindo iya kunciphisa ukubonakala kwiscreen kwaye iya kuyenza yahluke kancinci kanye njengoko isenzeka kwizixhobo eziphathwayo.
Izimbozo, azintle kakhulu, kodwa zisebenza kakuhle
Izimbozo azenzelwanga kuphela izixhobo eziphathwayo kwaye yiyo loo nto Iinkampani ezininzi ze-smartphone ziye zabona ishishini elifanelekileyo lokwenza ii-smartwatches ngokunjalo. Azihlali zibiza kakhulu, ngakumbi kwezinye zeyona ndawo zidumileyo zaseTshayina, nangona sele sikuxelele ukuba andicingi ukuba uya kufumana nantoni na entle, nangona isebenza kakhulu.
Ukuba awuthambeki ekubeni ulumke kakhulu kwiiwotshi zakho, nangona zingazubukeka zintle kakhulu, kuya kufuneka usebenzise enye yezi zinto zigubungelayo ubuncinci ngamanye amaxesha. Azibizi kakhulu kwaye umzekelo unokufumana ezininzi ezahlukileyo kakhulu, kwii-smartwatches ezahlukeneyo, kwiAmazon.
Kunqande ukungxama nokuzisa iwatchwatch yakho kwiindawo eziyingozi
Kwiinyanga ezimbalwa ngoku, bendinxibe iwotshi elungileyo esihlahleni sam ngalo lonke ixesha, ethande ukundikhupha kwingxaki ezininzi, ngakumbi xa ndisebenza nalapho ndingakwaziyo ukuhlala ngokusisigxina kwi-smartphone yam, esoloko ikwindlela ethe cwaka. Oko ndiyithengileyo bendonqikaza ukubeka iglasi enomsindo okanye isiciko kuyo ngokuqhubekayo.
Into endigqibe ukuyenza kukungxama, ngewatchwatch ivuliwe, kwaye kuphephe ukuyisondeza kwiindawo eziyingozi ezifana neekona zefanitshala okanye iingcango. Ukunyaniseka, akukho lula konke konke, kuba sonke sichitha isiqingatha sobomi bethu sibaleka, kodwa okwangoku ndikwazile ukuthintela nakuphi na ukubethwa okunokundishiya njengememori isikratshi esibi, kwibhokisi ye-smartwatch okanye kwiscreen.
Thatha smartwatch xa ubona ingozi kufutshane
Ingcebiso enkulu andinike yona umhlobo wam xa ndathenga iswatchwatch yam yayikukuyisusa nanini na ndibona ingozi kufutshane. Andifane ndisuse isixhobo sam, ngaphandle kokuhlawulisa, kodwa Qho xa kufuneka ndenze into enokuba yingozi ndiyisusa esihlahleni sam. Ukujiya igaraji, ukuhambisa ifenitshala okanye ukuhlamba imoto kunokuba zizinto apho iwotshi yakho smart inokungahambi kakuhle kwaye nalapho ungayi kuyidinga tu.
Ewe, ukuba uchitha usuku ujongene nengozi, mhlawumbi kuya kufuneka uthenge i-smartwatch ekhuselweyo kunye enganyangekiyo, ekukho kuyo ngakumbi nangakumbi kwintengiso ngamaxabiso anomdla kakhulu. Kwakhona lukhetho olukhulu njengoko sele sitshilo ngaphambi kokubeka isiciko kuyo.
Iifowuni, iitafile okanye iiwotswatch zezixhobo zemihla ngemihla, kodwa akukho mntu ufanele alibale ukuba kufuneka sizonwabele. Ukuba siyasokola maxa onke kwaye sihlala sinexhala lokuba ziyakukhuhla okanye zonakaliswe, ekugqibeleni siyakuphela singazonwabisi.
I-smartwatch iseyile iwotshi, ekufuneka siyisebenzisile kwaye siyonwabele kangangoko sinako, siyikhathalele, kodwa ngaphandle kokuthathela ingqalelo kuyo yonke inkcukacha. Ndingomnye wabo bacinga ukuba kungekudala okanye kamva siza kugqiba ukumbetha okanye simnike umkrwelo.
Nangona ndibhale eli nqaku ngewatchwatch yam esihlahleni sam, ndingomnye wabo ndingakhange ndibeke iglasi enomsindo kwiscreen, okanye ikhava. Ndicinga ukuba ngononophelo oluncinci, ngaphandle kokuyithathela ingqalelo, kuyakwanela ukukhathalela iwatchwatch yethu kwaye sandise ubomi bokuba luncedo kwesi sihlahla. Ukuba ayisiyiyo le uyicingayo, sikwenze kwalula kakhulu kweli nqaku ngokuchaza iingcebiso ezimbalwa ekufuneka uzenzile namhlanje.
Leliphi icebiso olilandelayo lokukhathalela iwatchwatch yakho kwaye uyigcine njengosuku lokuqala?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Ukuba kukho ezinye zazo ezinomdla ngokwaneleyo, siya kuzibandakanya kolu luhlu ukuze wonke umntu akwazi ukuzisebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » Iingcebiso ezi-5 zokukhathalela i-smartwatch yakho kwaye ke wandise ubomi bayo obuluncedo
IiSmartwatches aziyi kuba luncedo de ibhetri ihlale ubuncinci beentsuku ezi-4 ngaphandle kokutshaja kwakhona. Ukongeza, lo msebenzi awusoze wenziwe ngokungeniswa kuba le ndlela igqitha ibhetri inciphisa ubuncinci bayo -bufutshane ubomi obuluncedo. Ehlotyeni, ukudlula kwi-70% yentlawulo kunokuba nzima kakhulu emva konyaka wokuqala. Ungalitshintsha ibhetri, ewe. Kodwa akukho lula okanye ngexabiso eliphantsi.
Impendulo yakho inomdla kakhulu, siyaqaphela.
ukukhohlisa kwegeek sitsho
Isithuthuthu sam esingama-360 sisandula ukuguqula iminyaka emibini ubudala, kwaye sisesimeni esifanelekileyo nangona sifumene ukubetha okungaqhelekanga. Zixhathisa kakhulu nangona zingenalo ukhuseleko. Ukuzisola kwam kukuphela kwebhetri, ebikade ihleli iintsuku ezimbini kwaye ngoku inye kuphela, kodwa sisiphoso sohlaziyo kwi-marshmallow, eyenze ukuba ibe lisikizi. Ngokubhekisele kuluncedo, ndiyisebenzisa yonke imihla kwaye iye yaba liqabane elingadibaniyo. Esi sihloko siza kuxhomekeka kulowo nalowo kwaye sifuna ukwenza ntoni ngawo. Ngokunyaniseka, xa uneselfowuni ogcinwe kakuhle engxoweni yakho, ukuyikhupha kunokuba yinto odyssey. Iwotshi ekule ngqondo iyandongela ixesha elininzi, ngakumbi xa imiyalezo ingabalulekanga.
Ukuphendula kobuqhetseba begek
IMoto 360 yayiyiswatchwatch yam yokuqala, zeziphi iinkumbulo. Ngokubhekisele kwinto yokugqibela oyithethayo, ndivumelana ngokupheleleyo nawe, ngamanye amaxesha ukufumana kunye nokukwazi ukufumana i-smartphone yi-odyssey.